Minisitra Raharinirina Vahinala : ady amin’ny fandripahana ala any Amoron’i Mania | NewsMada
Mamita iraka any amin’ny faritra Amoron’i Mania, tamin’ity herinandro ity, ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny harena lovainjafy (Medd), sy ny minisitry ny Fitsarana, mikasika ny ady amin’ny Covid-19. Nohara­raotin’ny minisitry ny Medd, Raharinirina Vahinala Bao­miavotse ny diany any, ni­haonana tamin’ireo tompon’andraiki-paritry ny tontolo iainana sy ny harena lovainjafy (Dredd) any an-toerana. Anisan’ny nodinihina ny hikarohana vahaolana amin’ny fandripahana ny harena voajanahary, ny doro ala sy ny fikapana hazo an-tsokosoko, ny fanaovana saribao tsy misy fahazoan-dalana. Eo koa ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, indrindra any anaty ala sy ny faritra arovana, sns.
Sahirana ny mponina
Manana ny tandavanala Ambositra –Vondrozo (Co­fav) ny faritra arovana any Amoron’i Mania, mitohy hatrany Matsiatra Ambony hatrany Ihorombe. Maika tokoa ny fikarohana vahaolana amin’ny fanimbana ny tontolo iainana. Antony, voatery manimba ny harena voajanahary ny mponina satria tsy manana velon-tena maharitra, araka ireo voatanisa etsy ambony ireo. Marihina fa anisan’ny tena sahirana ireo mpanao asa sokitra ao Ambositra, satria akora fototra tena ilain’izy ireo ny voamboana sy ny andramena nefa voarara ny fitrandrahana azy, efa an-taona maro izao.
Tamin’ny volana jolay iny, nahatratra 104 ny trano lasy niorina tsy ara-dalàna tany anaty ala manodidina ny kaominina Ivongo, distrika Ivohibe, faritra Ihorombe, ao anatin’ny Cofav, Niisa 173 ireo olona mpitrandraka ala sy harena an-kibon’ny tany tsy ara-dalàna tratra, niisa 200 ny foto-kazo notapahina tsy ara-dalàna.